बेलायतको प्रधानमन्त्री नै रा’जधानी’कि *** म’हिला क’हा जा’ने ग’रेको खु ला’सा ! – ABC NEWS 24
बेलायतको प्रधानमन्त्री नै रा’जधानी’कि *** म’हिला क’हा जा’ने ग’रेको खु ला’सा !
एजेन्सी – प्रधानमन्त्री देश चलाउने पदीय जिम्मेवारी बोकेको मानिस हो । त्यो पदका थु प्रै सी मा हुन्छन् । गैर का नुनी ब स्तुको उपभोग र संरक्षण दिन पनि पाइदैन् । तर, यहाँ अ, वैध यौ,नध:न्दा चलाउने एक यौ नक:र्मी महि लाको का खमा सुत्न प्रधानमन्त्री समेत जाने गरेको खु लासा भएको छ । बेलायतको राजधानी ल ण्डनकी एक यौ, न कर्मी महि लाले स नसनी पूूर्ण खु लासा गरेकी छिन् । म साज पा र्लरको ना ममा रा जधानी ल ण्डनमा २० वर्षदेखि यौ, नध’न्दा च लाउँदै आ एकी ४२ वर्षीय मा इरा लिं’ग फो र्बले दे शका प्र धानमन्त्री स मेत यौ, न स, म्प:र्कको स न्तुष्टि लिन आ फूसँग सु तेको खु ला सा गरेकी हुन् ।
उनका अनुसार बेलायतका पाँच वटा प्रधानमन्त्रीले उनीसँग शा’री’रि’क स’म्प’र्क राखेका छन् । बेलायतमा उनी चर्चित व्युटिसियन मानिन्छिन् । तर, प्रहरीले छा’पा हा’न्दा उनको मसाज पार्लरमा यौ न’ध’न्दा हुने रहस्य २० वर्षपछि खुलेको हो । प्रहरीको सोधपुछमा माइराले बेलायतका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुसँग शा री’रि’क स’म्प’र्क राख्दै आएको बताएकी छिन् । यूकेका पूर्व प्रधानमन्त्री एडवर्ड हीथले पनि उनीसँग शा री’रि’क स’म्प’र्क राखेको खु’ला’सा भएको छ । प्रधानमन्त्री एडवर्ड पदमा भएकै बेलादेखि उनका खास ग्राहक हुन् ।
यौ न’ध’न्दा चलाएको भन्दै माइरावि रुद्ध २०१४ मा एउटा उजुरी परेको थियो । जसमा माइराले कलिला बच्चाहरुलाई यो ध न्दा’मा लगाएको आ’रो’प लगाइयो । तर, माइराले अर्कै खुलासा गरिन् । माइराले भनिन्-‘पूर्व प्रधानमन्त्री उनको का’ख’मा सु’त्न अधिकांश समय आउथे र उनी खास ग्रा’ह’क थिए ।’उनले देशकै प्रधानमन्त्रीको सहयोगमा यौ न’ध’न्दा सञ्चालन गर्दै आएको पनि खुलासा भएको छ । यो बीचमा उनी दुई पटक जे ल परिसकेकी थिईन् । तर, उनलाई प्रधानमन्त्रीले नै बचाएका थिए । अहिले माइरा प्रहरीको हि रासतमा छिन् । उनको मु द्दा’मा २० दिनपछि उच्च अदालतले फै’स’ला गर्दैछ । बेलायतमा वे श्या’वृ’ति ध’न्दा गर्न बन्देज छ ।
← मृ’तक भनेर फ्रिजर बक्समा राखेका वृद्ध २० घण्टापछि होस् खुलेपछि…..
श्रीमानले महिनौंसम्म नुहाएनन् भन्दै श्रीमतीले मागिन् सम्बन्ध विच्छेद →